'Bikela umshwalense uma uhluleka ukuvuselela ilayisensi'
Kusenobunzima kwabanye abashayeli ukuvuselela izincwadi zabo zokushayela
Fanelesibonge Bengu | September 4, 2021
ABANIKAZI bezimoto kumele babikele izinkampani zemishwalense yabo uma bebhekana nobunzima bokuvuselela izincwadi zabo zokushayela, ngokusho kweSouth African Insurance Association (SAIA).
I-SAIA ithe isithole inqwaba yemibuzo kubantu abakhathazeke ngokuthi izinkampani zemishwalense yezimoto zizomisa kanjani uma izincwadi zokushayela ziphelelwe yisikhathi ngemuva kuka-Agasti 31.
"Abashayeli kumele bakhululeke ngokuthi inkampani ngeke isichithe isicelo sokukhokhelwa ngenxa yokuthi izincwadi ziphelelwe yisikhathi. Kunokubambezeleka ekubekiseni isikhala ezikhungweni zokuvivinya ukushayela, amaDrivers Licence Testing Centres (DLTCs)."
Ithe izinkampani zilandela umyalelo we-Ombudsman for Short-term Insurance (OSTI) eyathi izinkampani kumele zingasichithi isicelo sokukhokhelwa uma izincwadi zokushayela ziphelelwe yisikhathi noma i-license disc yemoto.
"I-OSTI yathi inkampani kumele ibheke isicelo ngobunjalo baso ngaphambi kokuthatha isinqumo, hhayi ukuthi isichithe ngenxa nje yokuthi izincwadi zomshayeli ziphelelwe yisikhathi."
Yeluleke ngokuthi abashayeli bahlale bethinta izinkampani uma benenkinga yokuvuselela izincwadi futhi babe nobufakazi.
UNgqongqoshe wezokuThutha kuzwelonke, uMnuz Fikile Mbalula, usanda kumemezela ukuthi izincwadi zokushayela eziphelelwe yisikhathi phakathi kukaMashi 26 ngonyaka odlule kuya ku-Agasti 31 kulo nyaka zizothathwa njengezisebenzayo kuze kube uMashi 31 ngonyaka ozayo.